ပဲသွေးလေးနဲ့နို့စိမ်းအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ/Black Tofu, evaporated milk and coconut cream noodle | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
နို့စိမ်းများများ အုန်းနို့ပါလေကာထဲ့ထားလို့ နို့စိမ်းအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲလို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကို မုန့်ဟင်းခါးထက်ပိုကြိုက်ပါတယ်။ အုန်းနို့နဲ့လုပ်တဲ့မုန့်၊ အုန်းနို့ပါတဲ့ဟင်း မှန်သမျှအကုန်ကြိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီနေ့ကအိမ်မှာလဲ အုန်းနို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့မုန့်ရှိနေတော့ နို့စိမ်းများများနဲ့ချက်လိုက်တာပါ။ အုန်းနို့ကလဲကြိုက်တော့ အနံ့လေးတော့ပါမှပါလေ ဆိုပြီးနဲနဲထဲ့လိုက်တာ။ ပဲသွေးလဲလက်ဆောင်ရထားပါတယ်။ အမြဲ sweet ဖြစ်နေသောညီမလေး သီချယ် ဆီကပါ။
More evaporated milk less coconut cream in it is the reason why I named both in this cream noodle. I prefer coconut cream noodle to Moh-hin-ghar. I like pretty much all the dishes that contain or made of coconut cream. On that day, we had some snacks/desserts made of coconut cream that’s why I cooked this withabit more evaporated milk. I still added coconut milk to get the flavour at least plus I receivedablack tofu from my very sweet sister-like friend Thi Chail.
-ဆန်ခေါက်ဆွဲပြား အနဲငယ်( မုန့်ကျွတ်ကြော်ရန်)
-ကြက်သွန်နီ ၁လုံး အတုံးလေးများတုံးထားပါ
-ကြက်သွန်ဥနီအသေးလေးများအလုံးလိုက် ( မရှိရင် အကြီးကိုတုံးပြီးကြိုက်သလောက်ထဲ့ပါ)
– 1 kg of Noodle
-Rice flat noodle to fry for crispy toppings
-1 small whole chicken
-1 onion chopped into small pieces
-3 pieces of garlic, pounded
– salt and chicken powder
-1tbl spoons of curry powder
-whole small onions or if not available, chop the big onion into small pieces.
-5tbl spoons of Gram four are to dilute with water
-halfacan of coconut milk
-slice the black tofu into small pieces
Fry the flat rice noodles in oil withabit turmeric powder.
ကြက်ဥလေးများပြုတ်ထားကာ လှီးစိတ်ထားပါ။ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးကာ ရေအေးစိမ်ထားပါ။
Eggs are to boil and slice into small slices. Slice the onion and cover with cold water.
ကြက်သွန်ဖြူ ၊ နီ ကို ဆီများများထဲ့ကာအရောင်တင်မှုန့်၂ဇွန်းဖြင့်ဆီသတ်ပါ။ အိသက်ကတော့ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲဆိုဆီဝေ့နေမှကြိုက်လို့ပါ။ ဆီများများမကြိုက်ရင် လျှော့ထဲ့နိုင်ပါတယ်နော်။ ကြက်သွန်ကျက်ရင် ကြက်သားကို ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်ထဲ့လုံးပါ။ ပြီးရင်ရေ၁လီတာခွဲခန့်ထဲ့ပြီးတည်ထားပါ။
Sizzle the garlic, onions with 2tbl spoons of curry power in sizzling oil. I like the coconut cream noodle with the oil floating but less oil can be used if don’t like it. After enough sizzling, add the pieces of chicken which is already mixed with salt and chicken powder. Then add 1 and half litre of water and boil it.
ရေပွက်လာရင် အုန်းနို့၊ နို့စိမ်း တို့ထဲ့ပါ။ နောက်တခါ ထပ်ပွက်လာတဲ့အခါ ပဲမှုန့်ရေဖျော်ထားတာနှင့် ကြက်သွန်ဥလေးများ၊ ပဲသွေးအတုံးလေးများထဲ့ကာ ခဏအဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကြက်သွန်လေးများအလုံးမပျက် နူးပြီဆိုရင် အပေါ့အငံမြည်းကာ ဟင်းရည်ပြင်ပြီးရင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Once the water boils, add coconut milk, evaporated milk until it boils again. Then add the diluted gram flour, small onions, dices of black tofu and cover it withalid. Once the small onions are boiled in its form then taste itabit to see whether light or heavy in salt etc and if it is your delight then it is ready.
ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ခေါက်ဆွဲဖတ်ထဲ့၊ ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်ဥ၊ မုန့်ကျွတ်ကြော်၊ ငရုတ်သီးလှော်မှုန့် တို့ဖြင့်ပြင်ဆင်ကာ ဟင်းရည်ဆမ်းပြီးစားသုံးနိုင်ပါပြီ။ နှစ်သက်ရာတခြားအကြော်စုံများဖြင့်လဲတွဲစားနိုင်ပါတယ်။
When you prepare to eat, inaserving bowl, add the noodle, slices of onion, slices of egg, crispy flat rice noodle, crushed dried chilli and pour the cream on top and enjoy. You can add different kind of fritters as you wish.
15 comments on “ပဲသွေးလေးနဲ့နို့စိမ်းအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ/Black Tofu, evaporated milk and coconut cream noodle”
16/03/2012 @ 4:49 am
မမအိသက်ရေ… ပဲသွေးလုပ်နည်းလေးရှိရင် မ စ ပါနော်… :)) thank you!!!
16/03/2012 @ 9:14 am
tin pay mae naw ..
16/03/2012 @ 7:56 am
Hi! ma ei thet
what kind of bean powder do you use? roasted or regular bean powder.
16/03/2012 @ 10:06 am
i have post the gram flour pic. thanks
16/03/2012 @ 2:37 pm
မမ ပဲသွေးလုပ်နည်းလေး သင်ပေးပါအုံးနော် ကျေးဇူး
16/03/2012 @ 4:53 pm
very soon i will post naw, nyi ma lay. promise after this sunday naw.
18/03/2012 @ 4:08 pm
ပဲသွေး လုပ်နည်းလေးမျှော် တလင့်လင့်၇ယ်…
18/03/2012 @ 8:03 pm
i was away all day long and i have to work tomorrow july yae. will post very soon as fast as i can. 🙂
28/04/2012 @ 1:40 am
ပဲသွေး နဲ့ အုန်းနုို့ ခေါက်ဆွဲ အရမ်းကြိုက် ။ ပဲသွေးလုပ်နည်း လေးမျှော်နေပါတယ် ။ 😉
22/08/2012 @ 12:06 pm
11/02/2013 @ 10:50 pm
02/04/2013 @ 12:11 pm
02/04/2013 @ 11:07 pm
အမရေ လုပ်ပေးမယ် စောင့်ပေးပါနော် အဲဒီအလှည့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး မအားလို့ပါ 🙂
27/03/2014 @ 2:43 am
အိသက် ရေ။ ဒီနေ.အုံးနို.ခေါက်ဆွဲ ကိုအထက်ပါအတိုင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ချက်လိုက်တာ အရသာအလွန်ရှိပါ.ဘဲ။ မစားဘူးတဲ.သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှ အရမ်း နာမည်ရနေပါတယ် အိသက် ကျေးဇူးနဲ.ပေါ.။
04/05/2014 @ 8:30 pm
pae thway(black tofu) recipe please!!
LeaveaReply to ၀ါဝါ Cancel reply